theZOMI: Burma News International - March 14, 2013
Burma News International - March 14, 2013
Peace vs Burma military build-ups and clashes in central Shan State
Yesterday (12 March) fresh fighting between Shan State Progress Party / Shan State Army (SSPP/SSA) and Burma army occurred when the Burmese army opened fire at an SSPP/SSA soldier who left the base to fetch water near-by in Tangyan Township, northern Shan State. Afterward, Burma army continued its assault to overrun the SSA base and the fight continues until today, local sources said.
Sicknesses are spreading among children living in the Kutupalong and Leda unofficial refugee camps. Anwer,arefugee committee member from Kutupalong makeshift camp, said that many children from ages5to7are getting sick with chicken pox, measles, pneumonia or coming down with fevers.
The official number of Naga people in Myanmar is dropping because they do not have identification cards, said the president of Yangon Naga Student Association ataconference on March 11.
Authorities plan to charge those who led protest in Arakan without permission
The police in Arakan state are planning to charge some social activists who recently ledaprotest against the authorities plans to buildapermanent homes for Muslim refugees who left their homes in last year’s Arakan conflicts, saidawomen activist Ma Nyo who is in the list of those to be charged.
Land prices in the Hpa-an industrial zone have skyrocketed since it was set up in 2011. Today the price has tripled.
Wa absence at Kachin-Naypyitaw peace talks blamed on Chinese red tape
The Wa headquarters in Panghsang has faulted on the cumbersome bureaucratic practice across the border in Meng A (Mong Nga in Shan) for its failure to issueaborder pass to the group’s delegates in time to join the latest round of peace talks in Ruili on 11-12 March, according to the sources on the Sino-Burmese border.
Following her confrontation with villagers ataBuddhist chapel in Se Tel, near the Latpadaung copper mine in Sagaing Region, Aung San Suu Kyi finally left the village at about 2:15 pm on Thursday and was taken to another site at nearby Lakekhun Mountain,aresident living in Se Tel told Mizzima.
3 Bangladeshi constables seized by Burmese border force
Three Bangladeshi police were seized by the Burmese border security force, Nasaka within the territory of Bangladesh, on Wednesday, saidareport ofaBangladeshi local online news agency.
Kachin MP calls for political solution to drug problem
Speaking on the 4th day of the 6th session of the Amyotha Hluttaw (National Assembly), Kachin State Constituency # 1 MP Khet Hting Nan laid the blame for the country’s being on the top opium producers list to internal discord since Independence in 1948, reported Hot News, 14-20 March issue.
Wanbao-logo-1Both of the contractors at the Latpadaung copper mine—the Myanmar Wanbao Mining Copper Ltd and Myanma Economic Holdings—have welcomed the Inquiry Commission’s report and confirm that they will follow its recommendations.
Singapore’s National Development Minister Khaw Boon Wan said the island-state is looking to Myanmar to beasource for produce, particularly seafood and vegetables, according to Singapore media reports.
မြစ်ဆုံနှင့် အခြား ရေကာတာများ လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းရေး မြစ်ချောင်းများနေ့ လှုပ်ရှားမှု
တရုတ်ကြောင့် ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ တက်ခွင့်မရဟု UWSA ဆို
တရုတ်ပြည် ရွှေလီမြို့၌ မတ်လ ၁၁ ရက်မှ ၁၂ ရက်ထိ ၂ ရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် KIA နှင့် မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ တရုတ်ပြည် ဗျူရိုကရေစီ စနစ်၏ နှေးကွေးမှုကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု UWSA ဘက်မှ ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်သည်။
ကျောက်ဖြူ အထူး စက်မူဇုန် ပွင့်လင်းမြင်သာမူ ရှိစေရမည်ဟု အလုပ်သမား ဒုဝန်ကြီးပြော
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့တွင် တည်ဆောက်မည့် ကျောက်ဖြူ အထူးစက်မူဇုံနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပွင့်လင်း မြင်သာမူ ရှိစေရမည်ဟု အလုပ်သမား ဒုဝန်ကြီး ဦးမြှင့်သိန်းက ပြောသည်ဟု သိရသည်။
ကြေးနီစီမံကိန်း ဒေသခံများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဆန္ဒပြ
လက်ပံတန်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဒေသသို့ သွားရောက် ခဲ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဆည်တဲနှင့် မိုးကြိုးပြင် ကျေးရွာမှ ဒေသခံများက ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယွမ်နှင့် ဘတ်ငွေများကို ဗဟိုဘဏ်က တရားဝင် လဲပေးတော့မည်
တရုတ်နိုင်ငံသုံး ယွမ်ငွေနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသုံး ဘတ်ငွေများကို ဧပြီလ မတိုင်မီ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က တရားဝင် လဲလှယ်ပေးရန် စီစဉ်နေကြောင်း ဗဟိုဘဏ်မှတဆင့် သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ ကြံခါးချောင်း(ခရူးခီး)အုပ်စု၊ ကွင်းကလေးရွာအနီးရှိ ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်များကို မတ်လဆန်းပိုင်းမှ စ၍ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဟု ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU သထုံခရိုင်၊ တပ်မဟာ(၁)မှ တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားလိုက် သည်။
ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့ ရဲသား ၃ ဦးကို မြန်မာ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီး
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦး အပါအ၀င် လူ ၄ ဦးကို မြန်မာ နယ်စပ် လုံခြုံရေး နစက တပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း ဘင်္ဂလီ ဘာသာဖြင့် ရေးသားသည့် အွန်လိုင်း သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
KIO ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လိုင်ဇာလူထု ၂၀၀၀ ကျော် ကြိုဆို
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှပြန်လာကြ သော ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လိုင်ဇာရှိ ပြည်သူလူထုများက နယ်စပ်တံတား တစ်လျှောက် ၀မ်းသာအားရ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ရာမညနိကာယ မွန်ပရိသတ္တိစာဖြေပွဲကျင်းပ
လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ – ရာမညနိကာယဂိုဏ်းမှ မွန်ဆရာတော်ကြီးများကြီးမှူး၍ နှစ်စဉ် ကျင်းပမြဲဖြစ်သော မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ရာမညနိကာယ ပရိယတ္တိစာဖြေပွဲကို မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ပေါ် သာသနာ (၂၅၀ဝ)ကျောင်း၌ ယမန်နေ့က စတင်ကျင်းပနေပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။